Soo dejisan Comodo Internet Security Pro 12.1.0.6914 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudComodo Internet Security Pro
Bogga rasmiga ah: Comodo Internet Security Pro
Comodo Security Security Pro – waa software si loo ilaaliyo fayraska, hanjabaadaha shabakada, spyware iyo cambaareynta. Antivirus ayaa isbarbardhigaya feylasha liisaska liiska macluumaadka oo isticmaalaya hababka falanqaynta casriga si loo qiimeeyo amniga faylashaas, iyo haddii ay dhacdo in la ogaado shay aan la aqoon, waxay xaddidaa ficiladeeda illaa ay hesho natiijada baaritaanka. Comodo Internet Security Pro waxay bixisaa macaamilo dhaqaale oo ammaan ah iyo dukaamo online ah adoo adeegsanaya bogag internetka ah jawi ammaan leh. Qalabka falanqaynta habdhaqanka habdhaqanka ayaa si dhakhso ah u ogaanaya loona xakameynayaa ficilada faylalka shaki laga galo, nidaamka ka hortagga galmada ayaa ka fogeynaya geeddi-socodka khatarta oo ka difaacaya kaftanka. Comodo Internet Security Pro waxay si toos ah u dhigtaa faylalka shaki iyo codsiyada meel jawi gooni u ah oo ay hawlahoodu aysan waxyeelayn karin nidaamka ama xogta muhiimka ah ee isticmaalaha. Sidoo kale, Comodo Internet Security Pro ayaa kaa digaya xiriirada laga shakiyo ee kombuyuutarkaada, blocks isku dayaya in ay dhexgalaan calaamad fureen oo ay ka ilaaliyaan qabashada screen aan sawir lahayn.
Dab-damis iyo shaashadda bogga
Ka hortagga hababka halista ah
Soo dejisan Comodo Internet Security Pro
Faallo ku saabsan Comodo Internet Security Pro
Comodo Internet Security Pro Xirfadaha la xiriira